Ny fanorenana ny fifandraisana matotra eo amin'ny Fiarahana toerana ao Aostralia - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Fanorenana ny fifandraisana lehibe ny tanjona ireo frantsay tokan-tena amin'ny fikarohana ny tsara tarehy sy ny fitiavana maharitra tantaraNa izany aza, ny fitadiavana ny marina ny olona dia mety ho sarotra sy manahirana: ny olona izay manaiky ny rehetra ny fahadisoana izay haka fanahy anao isan'andro ho an'ny sisa amin'ny fiainanao, izay te-hampiasa vola fotoana betsaka araka izay azonao atao mba hihazonana ny firaisan-kina sy fitiavana ianao dia tahaka ny vaovao mpivady. Fanorenana ny fifandraisana matotra atao tsikelikely, ny mikasika ny antony manosika sy ny tsara fatra ny fihetseham-po. Ireto ny toro-hevitra mba hanampy anao hahita ny tsara indrindra ny fomba fahandro.
Mba hanorina fifandraisana matotra, ireto misy dingana manan-danja.
Fe-potoana ny manirery mialoha ny fifandraisana vaovao izay manome anao ny fahafahana hianatra bebe kokoa momba ny tenanao. Moa ve tena tsy mahalala izay tokony ho faly? Raha toa ianao ka hisaraka, anontanio ny tenanao hoe inona no azonao antenaina avy amin'ny hoavy lehibe fifandraisana. Eritrereto hoe inona ny fihetseham-po teo aloha ny fifandraisana tsy te-hiaina ao amin'ny ho avy, toy ny fialonana na ny tsy fahatokisana. Fanorenana ny fifandraisana lehibe mitaky ny fametrahana fanontaniana tsara. Ny fotoana rehefa mahita ny mpiara-miasa dia ho avy ihany koa ny fotoana tsara ho an'ny tena manokana fanombanana.
Tonga ny fotoana mba mijery ny lesoka ao amin'ny teo aloha ny fifandraisana sy mamaritra ny fepetra izay toa tena zava-dehibe aminao mba ho azo antoka fa vaovao ity olon-tiany dia ny tsara indrindra hanombohana.
Raha te-hiaina ny fitiavana tanteraka ny tantara, dia mitaky rehefa tonga ny mpiara-miasa fepetra fifantenana, izay ny ara-dalàna. Fa tsy misy tsy tonga lafatra na lehilahy na vehivavy, ary satria ianao mahalala izany, dia tokony ho kokoa, mamela heloka kokoa amin'ny fomba sasany ho malefaka kokoa amin'ny fomba hafa. Izao no fotoana mba hanao lisitra fohy, izay no mamaritra, tsy hoe fotsiny ny lehibe indrindra takiana ho an'ny ho avy mpiara-miasa, fa koa ny fepetra fanampiny. Ohatra, azonao atao ny mitady olona izay tsy manana ny ankizy ary aina maro ao Atsimon'i Frantsa. Ny zava-misy fa izy no manan-janaka dia mety ho teboka manan-danja ho anao, fa izay velona izy dia zavatra izay misokatra amin'ny fanovana sy ny maro malefaka kokoa, izay midika fa afaka mihevitra fa tsy an-katerena. Tsotra ireo tena fanombanana dia ho tena ilaina amin'ny fanorenana Fototra mafy ho an'ny fifandraisana matotra eo amin'ny ho avy. Manjavozavo ny faniriana ny hanorina fifandraisana mafy orina tsara, nefa izany dia tsara kokoa ny mahafantatra ny fomba sy ny izay, ny tena tsara. Ireo vahaolana hanampy anao mamorona dokam-barotra eo amin'ny toerana ny safidy. Taorian ny fifandraisana sy ny vitsivitsy ny resaka, dia manontany raha toa ny fifandraisana manana fahafahana ho tonga matotra sy maharitra. Anontanio ny tenanao raha vonona ianao hanao ny ezaka mba hanorina fa ny fifandraisana. Tsy momba izany, mba hanome vaovao ny mpiara-miasa ny zava-drehetra tiany, sy ny momba ny manomboka ny traikefa nahafinaritra amin'ny fomba malefaka.
Tsarovy fa ny fifandraisana no mandrafitra ny marimaritra iraisana, ary mitaky fotoana ho azy ireo mba hifanaraka miara-tonga lafatra.
Ankoatra ny fahaizana ny marimaritra iraisana, dia zava-dehibe ihany koa mba hanokana fotoana izao ny fifandraisana. Misy olona maro izay indraindray dia tsy afaka ny ho tafaraka haingana loatra, rehefa tokony ho nomena vintana kokoa mba hampisehoana fa ny fifandraisana afaka miasa. Ny fahatakarana ny fomba fijery, ny famoronana ny rivo-fahatokiana, ny fandatsahana ny Fototra nandritra ny roa ny firaisana tsikombakomba, ny fianarana rehetra ny vaovao momba ny hafa, ary mahita ny fifandraisana akaiky ireo dingana rehetra fa mitaky faharetana sy ny fampiasam-bola. Izany dia mitaky zavatra betsaka kokoa noho ny iray na roa andro mba hijery raha toa ka dia samy nanao ny miara-miaina.
Ny herin ny fitiavana miseho ihany izany any aoriana any, satria"raha fitiavana maharitra, izany no Fototry ny fiainana"(David Mamba).
ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat ny taona mampiaraka ny vehivavy Chatroulette online ho zava-dehibe ny hahafantatra ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana amin'ny zazavavy tranonkala ny lahatsary Mampiaraka online manambady vehivavy te hihaona aminao manambady vehivavy te-hihaona video Mampiaraka Moscow